Maalinta: 14 August 2017
EYüp-Pierre Loti-Miniatürk Xarun Ropeway Xarunta Lagu Dhisi Karo TC İSTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY, WAAXDA RAILWAY SYSTEM, YUROPEAN SIDE RAILWAY SYSTEM DIRECTORATE Eyüp-Pierre Loti-Miniatür Rope Xire [More ...]
11 Laba Laba Sannad Cusub oo Diyaargarow Gaadiidka Dadweynaha ee Diyarbakir loogu talagalay Kumanaan
Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaalada, oo sii wadata shaqadeeda sidii ay uheli lahayd adeeg gaadiid dadweyne oo aad u sahlan oo raaxo leh, waxay abuuri doontaa labo wado oo cusub oo daboolaya xaafadaha miyiga. Diyarbakir [More ...]
Dowladda Hoose ee Antalya, gaadiidka dadweynaha iyo joogsiyada waqtigaas oo ay ugu gudbinayso muwaadiniinta SMS iyadoo la bilaabay codsi cusub oo wargalinaya muwaadiniinta. Muwaadiniinta, joogsiga iyo nambarada xariiqda (0242) 606 07 SMS ilaa 07 [More ...]
Golaha Agaasimayaasha ee Kardemir waxay sameeyeen laba go'aano maalgashi oo muhiim ah si loogu isticmaalo gaasaska habka si wax ku ool ah oo loogu badalo hannaanka gaaska soo saaray sababtuna tahay kordhinta soosaarka ee korantada korantada. Wajahadan dhexdeeda, mid cusub [More ...]
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu ka qeyb galay kulankiisii ​​Wadatashiga ee Dheeraad ah ee Xarunta Shirarka Expo. Madaxweyne Erdoğan wuxuu khudbad ka jeediyay baaxadda kulanka wuxuuna hadallo ka jeediyay mashruuca garoonka diyaaradaha ee la qorsheeyay in la sameeyo. AIRPORT TO ANTALYA [More ...]
Kütahya waxay gaari doontaa gawaarida tareenada ee dhamaadka sanadka
Kütahya on Ataturk Boulevard iyo goobaha yar warshadaha in la diinta tuubbo dul hoos gudbo heerka galo 2 baaxadda mashruuca shaqada la dhamaystiri doono bilood 5 iyo tuneelo gudahood laga furi doonaa in gaadiidka dhamaadka sanadka. [More ...]
Shil tareen oo Masar ka dhacay
Ka dib shilkii tareenka ee ka dhacay Masar, ayaa madaxa Maamulka Tareenka Qaranka lagu soo waramayaa inuu is casilay. Sida ku xusan qoraal qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Gaadiidka, Major Midhat Shushe, oo ah madaxa Maamulka Tareenka Qaranka, ayaa isku dhacay laba tareen oo ku yaal Alexandria, waqooyiga Masar. [More ...]
Shiinaha jiilka xiga ee tareenka xiga ayaa ugu dhaqsaha badan suuqa
Jiilka cusub ee tareenka dhexdhexaadka ah iyo xawaaraha hoose ee magnetic ayaa soo saarey oo ay soo saartay Shiinaha ayaa si guul leh ku dhammeystiray duulimaadkii tijaabada ee Shanghai. Tareenka ayaa la filayaa inuu diyaar noqdo sannad gudihiis. Soo saaraha tareenka xawaaraha sare ee Shiinaha [More ...]
Özkaya, Dib-u-eegidda Maaraynta Shaqada Tareenka
Kuxigeenka AK Party Ali Özkaya Afyonkarahisar, Karakuyu-Bozanönü dayactirka waddo-tareenka ayaa lagu baarey goobta. Kuxigeenka AK Party Ali Özkaya Afyonkarahisar, 7 Karakuyu-Bozanönü wuxuu bilaabay daraasado dib-u-cusboonaysiinta tareenka ee bishii Agoosto. [More ...]
Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, ciyaarta Galatasaray Kayserispor ayaa la socon doonta garoonka lagu soo saaray bayaan loogu talagalay taageerayaasha. Marka loo eego, duullimaadyada Metro iyo Marmaray waxaa loo dheereeyay 01.00 habeenkii. 2017-2018 Super League İlhan Cavcav [More ...]
Production dalka Turkiga ee Bursa iyo nativism ifaysa Star
Bursa degmada Metropolitan, codsi Turkey ee Northel si gaar ah soo saaray boqolkiiba 100 shirkadda of Rose Turkey ugu horeysay ee gudaha dabaysha, aasaasay warshad Bursa la rakibay. Dhirta Dabaysha Dabaysha (RES) ee gobolka Aydınpınar ee Mudanya [More ...]
3. Tallaabada kowaad ee magaca garoonka ayaa la dhigay Google
Istanbul 3 waxaa laga dhisay Waqooyiga Dhirta. Dood-wadaagyada magaca garoonka ayaa ajande ku jiray muddo dheer. Magaca garoonka diyaaradaha ee khariidadaha Google [More ...]
TCDD 4 Agaasime Goboleed Demolition of Dhismooyin Kala Duwan oo udhaxeeya Erzurum iyo Kars GPS, Total Station, Elektrooni Nivo iyo Optical Nivo ayaa la iibsan doonaa
Waxaa loo go’aamiyey shaqaalaha caafimaadka gurmadka degdegga ah ee sawirro ka qaaday halkii ay guteen waajibaadkoodii shilkii tareenka ee dhawaan Masar ka dhacay. Dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dambeeyay shilkii tareenka ee ka dhacay Alexandria, Masar ayaa laga wada hadlay. laba [More ...]